प्रधानमन्त्री ज्यु, सम्पति ३ वटा मोबाइलमात्रै भनेर ढाँट्ने? त्यो हातका औँठी चाहिँ के त? | भिडियो सहित | EuropeNepal.Net
प्रधानमन्त्री ज्यु, सम्पति ३ वटा मोबाइलमात्रै भनेर ढाँट्ने? त्यो हातका औँठी चाहिँ के त? | भिडियो सहित
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउँदा तीन वटा मोबाइल मात्र भनेर लेख्नुभएको रहेछ। तर भर्खरै खिचेको फोटोमा भने उहाँको ह...
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउँदा तीन वटा मोबाइल मात्र भनेर लेख्नुभएको रहेछ। तर भर्खरै खिचेको फोटोमा भने उहाँको हातका दुई वटा औँलामा औँठी देखिएको छ। हेर्दा त ती औँठी सुनकै जस्तो देखिन्छ। त्यो कसको मागेर लाउनु भएको होला त?
यस्तो छ औँलामा देखिएका औँठी।
सम्पति विवरणमा प्रधानमन्त्रीले केही पनि नभएको भनेका छन्।
केही पनि नभएको भए तीन वटा मोबाइल चाहिँ किन लेखिएको होला ? अरु कुनै पनि मन्त्रीले मोबाइल लेखेका छैनन् त। कि अरु मन्त्रीहरुले मोबाइलै बोकेका छैनन् ?
मोबाइल सम्पति हुने हो भने अरु मन्त्रीले पनि त्यो लेख्नु परेन ?
त्यस्तै मोबाइल सम्पति हो भने हातमा लगाइएका औँठी, जुत्ता, लुगा पनि सम्पति हो कि हैन ?
EuropeNepal.Net: प्रधानमन्त्री ज्यु, सम्पति ३ वटा मोबाइलमात्रै भनेर ढाँट्ने? त्यो हातका औँठी चाहिँ के त? | भिडियो सहित